Lazain’ny fitsarana Taiwaney ho tsy mahatapaka tamin’ny raharaha loza an-dranomazina ry zareo, mampiakatra ny raharaha ireo niharam-boina · Global Voices teny Malagasy
'Tokony hoheverin'ny fitsarana Taiwanesey indray ny toerana ara-zon'olombelona ireo Vietnamiana
Voadika ny 31 Oktobra 2019 19:21 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, Français, English
Pikantsary avy aminà horonantsary momba ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny firaisan'ny sivily teo ivelan'ny fitsarana distrika Taipei tamin'ny 24 Oktobra 2019. Tao amin'ny “Ny Rariny ho an'ireo niharam-boina tamin'ny Formosa.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana tamin’ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Lingua Global Voices Shinoa.
Tamin'ny 14 Oktobra 2019, nesorin'ny Fitsaram-paritr'i Taipei ny fitoriana napetrak'ireo mpanjono Vietnamiana 8.000 tamin'ny Formosa Plastics Group ao Taiwan (FPG) noho ny loza an-dranomasina tamin'ny taona 2016 tany Vietnam. Nilaza ny fitsarana fa tsy manana fahefana hisahana io raharaha io ry zareo, saingy nampiakatra ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony ny mpisolovavan'ireo mpitory tamin'ny 24 Oktobra.
Hita fa tena loza goavana ho an'ny tontolo iainana teo amin'ny tantaran'i Vietnam ny loza an-dranomasina, izay nitranga tamin'ny 6 aprily 2016. Niteraka fahafatesana trondro faobe sy fiainana an-dranomasina tao afovoan'i Vietnam ny zava-nitranga, vokatry ny fandefasana fako misy poizina any an-dranomasina’ nataon'ny Ha Tinh Steel Corporation, sampan'orinasan'ny FPG.
Nihena be ny indostrian'ny jono tany amin'ireo faritra voakasika taorian'ny loza an-dranomasina ary nanombatombana fa mety haharitra folo taona ny fanarenana tanteraka.
Niaiky fa tompon'andraikitra tamin'ilay loza ny FPG ny 30 jona 2016 ary nanaiky hanome onitra 500 tapitrisa dolara amerikana ho an'ny governemanta Vietnamiana hanaovana asa fanavotana tamin'ny loza. Na izany aza, nomen'ny governemanta Vietnamiana indrindra ho an'ireo monina ao Ha Tinh ilay onitra. Tsy mbola naharay vola mihitsy anefa ireo izay mipetraka any amin'ny faritra hafa any Vietnam afovoany, toa an'i Quang Binh, Nghe An, ary Quang Tri.
Sary avy amin'ny fanangonan-tsonia Rariny ho an'ireo Niharam-boina tamin'ny Formosa.
Noho ny fanampian'ireo fikambanana miaro ny tontolo iainana sy ny zon'olombelona any Taiwan sy Vietnam, afaka nisolo-tena ireo Vietnamiana mpitory 7.875 ireo ny mpisolovava ao Taiwan ary nametraka fitoriana ny FPG tany amin'ny fitsarana distrikan'i Taipei tamin'ny 11 jona 2019, mangataka vola mitentina 4 tapitrisa dolara amerikana ho fanonerana ny vondrona voalohany ahitana mpitory miisa 51.
Na dia nanaiky ny 1,2 tapitrisa dolara NT (39.234 dolara amerikana) aza ny Fitsarana Distrikan'i Taipei ho fandoavam-bola tamin'ny raharaha tamin'ny 13 jona, dia nolaviny ny raharaha efa-bolana taty aoriana noho ny antony fa tsy manana fahefana hitantana izany izy ireo.
Samy naneho ny fahadisoam-panantenany tamin'ny fanapahan-kevitra ivelan'ny fitsarana distrikan'i Taipei tamin'ny 24 Oktobra ireo mpisolovava ho an'ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana ary nampanantena hitondra ny raharaha any amin'ny Fitsarana Avo. Tao anatin'ny fanambarana navoakan'ny Fikambanana Taiwan momba ny zon'olombelona, ​​nanamarika ny fikambanana fa tsy tokony hotantanin'ny fahefana manokana ny raharaha satria ny toriana, FPG miorina any Taiwan, no mpamatsy vola sy tompon'andraikitra lehibe ho an'ny sampan'orinasany Ha Tinh Steel Corporation ao Vietnam.
Nilaza i Hsin-Wen Huang, iray amin'ireo mpisolovava fa na dia nitranga tany Vietnam aza ny loza an-dranomasina, dia tokony handinika ny lafin'ny zon'olombelona amin'ny raharaha ny fitsarana any Taiwan:
Mifanohitra amin'ny tena foto-kevitry ny rariny ny zava-misy fa tsy miraharaha mihitsy ny famoretana mahery vaika, ny fisamborana tsy ara-drariny sy ny fanagadrana ireo traboina tamin'ilay loza ny fitsarana ary milaza fa ny fahefam-pitsarana ao Vietnam no tokony hisahana ny raharaha
Raha ny marina dia maherin'ny 500 ireo niharam-boina tamin'ny loza an-dranomasina izay niezaka nametraka ny raharaha tany amin'ny tribonaly Vietnamiana tamin'ny volana Oktobra 2016 saingy nolavina noho ny antony fa tsy nahavita nanome porofo momba ny fahavoazana marina nihatra taminy ireo mpitory. Rehefa nanomboka nampiseho porofo marina momba ny fahavoazana ireo niharam-boina, dia notafihin'ireo jiolahimboto notohanan'ny governemanta izy ireo, ary nosamborina sy nosaziana mafy ho manohitra ny fanjakana sy ny sisa. Nomelohin'ny ONU, tahaka ny HRC sy ny OHCHR ny fanitsakitsahan'ny fanjakana Vietnamiana ny zon'ny sivily sy ny fahalalahana, izay noraketin'ireo fikambanana tsy miankina samihafa. Noraketin'ny fampahalam-baovao tsy miankina Vietnamiana ihany koa ny loza an-dranomasina sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona teo anelanelan'ny volana aprily 2016 hatramin'ny Oktobra 2017:
… nahitana krizy maha-olona sy ara-politika ny voina an-dranomasina rehefa tsy nahomby tamin'ny fiantohana ny fanonerana sahaza ho an'ireo niharam-boina ny governemanta Vietnamianina; lasa lavitra mihitsy aza izy ireo amin'ny fanakanana an-kerisetra ny feon'ny mpanohitra. Nahatonga ny taona 2016 sy 2017 ho taona maizina ho an'ny demokrasia sy ny fahalalahana any Vietnam ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona marobe, izay miseho amin'ny fitazonana tsy ara-dalàna, ny herisetra ataon'ny polisy amin'ny olona sivily ary ny fanagadrana hatrany ireo mpikatroka milamina.
Hatramin'ny volana Oktobra 2016 [hatramin'ny Oktobra 2017], mpikatroka am-polony no voasambotra ary niatrika fiampangana mifandraika amin'ny hetsik'izy ireo miady amin'ny Formosa ary mitaky ny zo ara-tontolo iainana.
Nilaza ihany koa i Huang fa ny toriana, FPG, no tompon'andraikitra amin'ity loza ity:
Ankoatra ny Japan Steel, miara-mampiasa vola ao amin'ny Ha Tinh Steel Corporation any Vietnam ny FPG, Formosa Chemicals, TASCO Group – vondron'orinasa Taiwaney ny ankamaroany. Ary ny FPG no mihazona renivola betsaka indrindra izay nametraka ny sampan'orinasa Vietnamiana voalohany. Fanta-daza amin'ny endrika fanapahan-kevitra anatiny manokana ny FPG, nodinihina ny fampiasam-bola rehetra ary nankatoavin'ny biraon'ny fitantanana azy. Ny FPG no nandrindra ny politikan'ny fifanekena momba ny fananganana, ny fitantanana sy ny fiarovana ny tontolo iainana an'ny Ha Tinh Steel Corporation. Noho izany dia tokony ho azo any Taiwan ny porofo mifandraika amin'izany. Tokony hanana fahefana i Taiwan amin'io raharaha io …
Manana tantara lava be momba ny fandotoana tontolo iainana, ao anatiny sy ivelan'i Taiwan ny FPG. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, niatrika fandoavana onitra goavana sy fitoriana tao Etazonia, indrindra tao Texas, Louisiana, ary Mississippi ny FPG sy ireo sampan'orinasany iraisam-pirenena rehefa nandefa fako simika misy poizina tamin'ny tany sy ny loharano ambanin'ny tany.
Taorian'ny nananapahàn'ny Fitsarana Distrikan'i Taipei ny tsy fisian'ny fahefana, nandany fanapahan-kevitra maika ny Federasiona Iraisampirenena momba ny Zon'olombelona (FIDH) ary niantso ny tribonaly any Taiwan mba handinika indray:
… averino dinihana ny raharaha Formosa ary henoy ny fifandirana mba hanomezana fiarovana tsara kokoa ho an'ny tombontsoan'ireo mpitory, izay marefo ary manome antoka fomba fanao izay mifanaraka kokoa amin'ny fiarovana ny zon'olombelona eo ambanin'ny lalàna iraisam-pirenena. Hahatratra ny fitovian-jo eo amin'ny roa tonta (ny mpitory sy ny toriana) ny fanamafisan'ny tribonaly ao Taiwan ny fahefana amin'ity ady ity, ary manatanteraka ny filàna fitsarana marina sy tsy miangatra, ary miantoka ny hafainganan'ny raharaham-pitsarana sy ny fizotran-kevitra ifandirana ara-toekarena.
Nanomboka ny fanangonan-tsonia an-tserasera ihany koa ny Rariny ho an'ireo Niharam-boina tamin'ny Formosa (JFFV) mba hangataka amin'ny tribonaly Taiwaney hisahana an'io fitoriana io. Olona maherin'ny 2300 no efa nanao sonia izany fanangonan-tsonia izany.
Miandry ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Avo mikasika ny adihevitra fahefam-pitsarana ankehitriny ny fitoriana.